Zvakanaka izvo! Nyore, nekukurumidza uye pachena mari | ECommerce nhau
Zvakanaka izvo! Nyore, inokurumidza uye yakajeka mari
ECommerce nhau | | Zvechokwadi uye nhau
Chokwadi icho pane imwe nguva mari isingatarisirwi inomuka zvakaita sekugadzirisa mudziyo kana mudziyo pamba, kutenga komputa nyowani kana firiji yechikanganiso chisingakundike. Hatikwanise kugara tichitarisana nemubhadharo werudzi urwu zvakananga, nerombo rakanaka, tine sarudzo senge suchQuéBueno!
Kutenda ¡QuéBueno! tichakwanisa kuwana mari nenzira yakapusa, nekukurumidza uye pachena. Ndezve kutsanya online kiredhiti yemari yakadzikiswa uye pfupi pfupi, nayo yekugona kutarisana nerudzi urwu rwemari isingatarisirwi.
Imwe yemabhenefiti makuru ¡QuéBueno! inotipa ndeyokuti nzira yatingawana nayo zvikwereti zvako iri nyore chaizvo. Zvinogona kunge tichifanira kubhadhara mari isingatarisirwi, kana rwendo kana mari yekurapa sachiremba wemazino. Hazvina mhosva chikonzero, Hatifanirwe kupa tsananguro nezvekwakabva ichi chikwereti chepamhepo.
1 Maitiro ekuwana chikwereti chinokurumidza mu ¡QuéBueno!
2 Zvinodiwa kuti uwane chikwereti mu ¡QuéBueno!
Maitiro ekuwana chikwereti chinokurumidza mu ¡QuéBueno!
Isu tinongofanirwa kuenda kune webhusaiti yekambani. Ikoko tinowana ruzivo rwese nezve izvo zvinokurumidza zvikwereti, iyo mari inopihwa uye nemamiriro acho. Nekudaro, usati watombokumbira imwe, isu tatova neruzivo rwese uye tinokwanisa kuona kana zviri nyore kana kwete. Transparency yakakosha kune ¡QuéBueno!
Tinofanira kudaro ratidza huwandu hwemari yatinoda kuwana uye nguva yatichazodzosera mairi. Isu ndisu tinoona izvi, kuti tikwanise kusarudza izvo zvinotibatsira zvakanyanya uye zvinowirirana zvinoenderana nemamiriro ezvinhu. Tevere, isu tinofanirwa kuzadza fomu diki neinodiwa yemunhu data, izvo zvinotora nguva shoma kwazvo kupedzisa
Kana taita izvi, munguva ingangoita maminetsi gumi tichava nemhinduro. Kana iyi mhinduro iri yakanaka, isu tinobva tagamuchira mari iyi yatakumbira kuna ¡QuéBueno! muakaundi nhamba yedu. Kurumidza uye nyore.
Zvinodiwa kuti uwane chikwereti mu ¡QuéBueno!
Chero ani zera repamutemo achave nemukana wekukumbira chikwereti mu ¡QuéBueno! Muchokwadi, izvo zvinodikanwa zvinosimbiswa nekambani kuti zvikwanise kuita zvinotevera zvinotevera:
Iva nemakore gumi nemasere
Iva muridzi weakaundi account
Iva nechikwereti / kadhi rechikwereti rakabatana neakadaro account account
Kana tikango tevedzera iwo, isu tinokwanisa kuzokumbira iyi kiredhiti, tichitevera matanho atakambotaura kare. Zvakanaka izvo! uchave mutariri wekuongorora kana zvichikwanisika kukweretesa iyo mari yakumbirwa. Kune izvi, zvimwe zvinhu zvinozotorwa mukufungwa, izvo zvakanaka kuti uzive.
Yedu nhoroondo inokwanisika yezvakatadza uye nhoroondo yechikwereti ichaongororwa kuti tione kana isu takanyorera kune akawanda mareti mune yakapfuura kana nhasi. Zvakare kugona kwedu kubhadhara mari iyi. Maitiro anofanirwa kupasiswa, asi sekutonga kwese zvese zvichave zvakarongeka, uye mumaminetsi gumi chete tichava nechikwereti chedu.
Sekuona kwedu, chinhu chakanaka sei! auya kuzopa chimwe chakasiyana mumusika wezvemari. Zvakareruka, mari inokurumidza kwazvo (mumaminetsi gumi chete tinogona kuva nayo), inoenderana nemamiriro edu uye iri pachena.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Zvakanaka izvo! Nyore, inokurumidza uye yakajeka mari